तपाईंको बैठक कोठाको लागि Ikea--सीटर सोफेहरू पत्ता लगाउनुहोस् सजाउनुहोस्
मारिया vazquez | 13/07/2021 10:00 | फर्नीचर, लाउन्जहरू
के तपाईं बैठक कोठा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई आफ्नो पुरानो सोफा बदल्न आवश्यक छ? Ikea सूचीमा तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ सबै शैलीहरूको सोफेहरू ताकि तपाईंको बैठक कोठाको सजावट वा तपाईंको फर्निचरको शैली जुन तपाईं आफ्नो सोफा फेला पार्नुहुनेछ। Living-सिटर सोफाहरू हाम्रो बस्ने कोठामा सबैभन्दा लोकप्रिय हो। सब भन्दा चाखलाग्दो प्रस्तावहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
को Ikea बाट3सीटर सोफा तिनीहरू पारिवारिक कोठा प्रस्तुत गर्नका लागि आदर्श हुन्। Ikea मा तपाईं तिनीहरूलाई धेरै विविध डिजाइन, प्रकाश र आधुनिक सौंदर्य, केही, भारी र अधिक पारंपरिक सौन्दर्य, अरूको साथ पाउनुहुनेछ। तपाईं छाला, नक्कल छाला वा कपडा सोफेहरू बीच र between्गहरूको विस्तृत श्रृंखलामा पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
1 छाला वा अशुद्ध छाला सोफाहरू
1.1 स्टॉकहोम, हाम्रो मनपर्ने
2 कपडा सोफेहरू
2.1 ल्यान्डस्क्रोना, सोडरहम्न र स्मेडस्टोर्प, सबैभन्दा हल्का
2.2 पुर, Vimle र Slatorp, बहुमुखी प्रतिभा
छाला वा अशुद्ध छाला सोफाहरू
कल्पना एक साँचो क्लासिक? Ikea छाला सोफा दुवै पारंपरिक र समकालीन शैलीहरू अँगाले। थप रूपमा, सामग्रीलाई यस्तो तरिकाले व्यवहार गरिन्छ कि तपाईं यसलाई वर्षौंसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ छाला क्लीन्जर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइँ यसको उपस्थिति र आरामलाई पनि लामो गर्न सक्नुहुन्छ।
स्टॉकहोम, हाम्रो मनपर्ने
स्टॉकहोम एक सोफा संग छ aniline छाला केसहरु, छालामा पिग्मेन्ट नभएको र पातलो सुरक्षात्मक तह मात्र छ। यसले छालालाई "सास फेर्न" मद्दत गर्दछ र यसको प्राकृतिक उपस्थितिलाई चिन्हका साथ बनाए जुन प्रत्येक टुक्रालाई अद्वितीय बनाउँदछ। प्रयोग र समय बित्दै जाँदा यो नरम पनि हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ र सुन्दर पाटिना प्राप्त गर्दछ।
Ikea स्टॉकहोम छाला सोफा
ल्याण्डस्क्रानाले पुनरुत्पादित गर्दछ विशेषता रजाई समाप्त को चेस्टर सोफा। सम्पर्क सतहहरू १.२ मिमी बाक्लो, गहिरो रyed्गको दानाको छालाले बनेको हुन्छ, सामग्री जुन नरम र स्पर्शमा रमाईलो हुन्छ। बाहिरी सतहहरू टिकाऊ लेपित कपडामा आच्छादित हुन्छन् जुन छालाको समान देखिन्छ तर मूल्यलाई कम राख्न मद्दत गर्दछ, र प्याडिंग आरामको लागि लचिलो फोम हो।
ल्यान्डस्क्रोना र Vimle
यो आरामदायक र आरामदायक सोफाले तपाईंलाई लामो समय सम्म टिक्नेछ, किनकि सीट कुशन अत्यधिक लचिलो फोमले बनेको हुन्छ, यस्तो सामग्री जसले राम्रो समर्थन प्रदान गर्दछ र तपाईं उठिसके पछि यसको मूल आकारमा फर्किन्छ। यसको मोड्युलर सुविधा यसले तपाईंलाई सिटहरूको संख्या, डिजाइन र सोफाको कार्यहरू तपाईंको रुचि र आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, चेज लोभको एक सीटको मुनिको भण्डारन खाली ठाउँकोसँग हुन्छ जुन खुला रहन्छ त्यसैले तपाईं वस्तुहरू भित्र र आरामपूर्वक राख्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं फेब्रिक सोफा मन पराउनुहुन्छ? विकल्प Ikea सूचीमा अनन्त छन्। तपाईं फेब्रिक सोफेहरू भेट्टाउनुहुनेछ एकदमै फरक डिजाइन, फिनिश र रंगहरूको साथ ताकि तिनीहरूलाई तपाईंको बैठक कोठामा अनुकूलन गर्न सजिलो होस्। हामीले ती छनौट गरेका छौं जुन हामी सब भन्दा चाखलाग्दो ठान्दछौं, पत्ता लगाउनुहोस्!
ल्यान्डस्क्रोना, सोडरहम्न र स्मेडस्टोर्प, सबैभन्दा हल्का
सरल, न्यानो र स्वागत शैली को लागी धन्यवाद, सीट कुशन को राम्रो समर्थन, कभर को नरम समाप्त र यसको सही पालन, ल्यान्डस्क्रोना आराम, समारोह र शैली प्रदान गर्दछ। यसको छाला संस्करण जस्तै, यो पनि एक quilted समाप्त छ।
Soderhamn पृष्ठभूमि को एक धेरै को साथ एक आधुनिक डिजाइन प्रस्तुत गर्दछ। र यदि तपाईंलाई यस तरीकाले जस्तो मनपर्दछ भने, तपाईंले प्रयास गर्नुहुँदा देख्नुहुनेछ। किनकि यसको धेरै गहिराइ छ, पछाडि कुशनहरू सार्न सकिन्छ र यो एक निलम्बन कपडाबाट बनेको छ, यो वास्तवमै आरामदायक छ। यो विभिन्न र colors्गमा पनि उपलब्ध छ, सुन्तला जत्तिकै साहसी सहित
सेमेडस्टोर्प, यसको अंशको लागि, उनीहरूलाई रुचाउनेहरूको लागि सोफा हो हाँस्टायर को कोमल तरिका तर आधुनिक सुविधाहरू जस्तै नरम फोम कुशन, आरामदायक आर्मेस्ट्स, र टेपरेर खुट्टाहरू सहित, रेट्रो हेराईमा जुन आउने बर्ष पछि आउँदछ। यस आरामदायक सोफामा कुशनहरूमा पकेट स्प्रि ,हरू, उच्च-लचिलोपन फोम, र प्याडिंगको माथिल्लो तह समावेश छ। तिनीहरू धेरै सहज छन् र विकृति बिना राम्रो समर्थन प्रदान गर्दछ।
पुर, Vimle र Slatorp, बहुमुखी प्रतिभा
यसको सुरुचिपूर्ण डिजाइनको साथ, द्रुत र सजिलो असेंब्ली, यसको सजिलो मर्मत र हटाउन योग्य र धोउन योग्य कभर, Pärup सोफा सधैं उत्तम कोठामा बैठक कोठा प्रस्तुत गर्न को लागी एक उत्तम विकल्प हो। यससँग सावधानीपूर्वक विवरणहरू सहित कालातीत डिजाइन छ जुन आर्मट्रेस र काठको खुट्टाको किनारा हो। खुट्टाहरूले सोफाको डिजाईन हल्का पार्दछ र तपाईंलाई तल सजिलैसँग भुइँ सफा गर्न अनुमति दिन्छ।
Vimle श्रृंखला, जसमध्ये हामीले पहिले नै बोलेका छौं, यसले मोड्युलहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो रुचिको लागि मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूलन समाधान सिर्जना गर्न। र यदि तपाईंको जीवनमा परिवर्तनहरू छन् भने, तपाईं सोफालाई ठूलो बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई परिवर्तनहरूमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म तर नरम सोफा धेरै टिकाऊ हो, किनकि सीट कुशनहरू मेमोरी फोमले भरिएका हुन्छन् जुन तपाईंको शरीरलाई राम्रो समर्थन प्रदान गर्दछ र तपाईंको मूल आकारमा फर्कन्छ जति सक्दो तपाईं उठ्नुहुन्छ।
Ikea को--सीटर सोफाहरू जसमा ध्यान नदिईन्छ त्यो अर्को स्लटोरप हो, एक सोफा जसको चेन्ज लाउन्ज तपाईं दायाँ वा बायाँ राख्न सक्नुहुन्छ, र स्थानहरू परिवर्तन गर्नुहोस् जब तपाईं चाहनुहुन्छ। को यो सोफा को उच्च फिर्ताथप रूपमा, यसले तपाईंको घाँटीलाई अतिरिक्त समर्थन प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई आराम गर्न अनुमति दिन्छ।
Ikea बाट यी se-सीटर सोफाहरूमध्ये कुन तपाईंको जीवनशैलीसँग उत्तम छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » लाउन्जहरू » तपाईंको बस्ने कोठाको लागि Ikea--सीटर सोफेहरू पत्ता लगाउनुहोस्